ब्लग | विशेष खोज, बिक्री को लागी असामान्य घरहरु
घर » ब्लग
In एक घर जग्गा विज्ञापन लेखन
पोस्ट 21 सक्छ, 2020
तपाईंको घर वर्णन गर्नुहोस् त्यहाँ बस्न मनपर्‍यो को छवि बनाउन। तपाईंको घर जग्गा विवरणको लक्ष्य भावनात्मक हिसाबले घर-शिकारीहरूलाई यस्तो फेसनमा ढुवानी गर्नु हो कि उनीहरू आफैले तपाईंको घर र तपाईंको आधारमा चित्रण गर्छन्।
चाहे तपाईं घरमालिक तपाईं आफ्नै बिक्री गर्न प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ वा घरमालिक प्रतिनिधित्व गर्ने घर जग्गा एजेन्ट, घर मात्र भवन भन्दा बढि चीज हो। सबै घरहरूको ईतिहास छ - नयाँ निर्माण पनि। घरको इतिहास यसमा निर्माण गरिएको भुमिबाट शुरू हुन्छ। किन त्यहाँ निर्माण गरियो? कुन स्थानले विशेष वा चाखलाग्दो बनाउँछ? के यसमा हेराईहरू छन्? यो एक विचित्र शहर भित्र छ, एक प्रमुख शहर मा एक ब्राउनस्टोन, वा एक समुद्रीतारा भाग्न?
तपाईंको घर वर्णन गर्ने वा प्रभावशाली शब्दहरूको साथ सूचीबद्धले सबै भिन्नता गर्न सक्दछ
त्यहाँ घरको वर्णन गर्न धेरै उपकरणहरू छन्। यसको सेटिंग्स, यसको वास्तुकला, इतिहास, मालिकहरू, इत्यादिमा ध्यान दिनुहोस्। म पहिले सेटिंग वा स्थानबाट सुरू गर्दछु, त्यसपछि मेरो भित्र काम गर्नुहोस्, जुन म तपाईंसँग अर्को पोस्टमा साझेदारी गर्नेछु।
तपाईंको घरको विवरणमा सेटिंग्स प्रयोग गर्दै
तपाईंको घर वर्णन गर्न सेटिंगको बारेमा कुरा गर्नुहोस्। के घर सहरमा छ? छिमेकी रेस्टुरेन्टहरूको बारेमा कुरा गर्नुहोस् - "चीयर्स" यदि तपाइँ गर्नुहुन्छ। के तपाईं हरियो-किराणा सामान को लागी एक बाइक सवारी गर्न सक्नुहुन्छ? यदि सम्पत्तीमा पहाडहरू वा ढलानहरू छन् भने यसमा टेरेस्ड बगैचा वा चट्टान बगैचाको लागि दृश्यहरू वा क्षेत्रहरू छन्? के त्यहाँ पानी सुविधा छ - पोखरी कि स्टक छ वा स्टक हुन सक्छ। के तपाईं यसमा डु pad्गा फाल्न सक्नुहुन्छ? रचनात्मक शब्दहरू प्रयोग गर्नुहोस्। घर वर्णन गर्न तपाईंको कल्पनाशक्ति प्रयोग गर्नुहोस्।
एक गुल्लीले मेहराब गरिएको पुलको लागि अवसर प्रदान गर्दछ।
घर खरीद गर्दा खरीदकर्ताहरूले कुनै पनि प्रकारको पानीको खोजी गर्छन्। के तपाइँसँग स्ट्रिम वा क्रीक छ - के यो मौसमी हो वा वर्षभर? के तपाईको सम्पत्ती काठको छ वा आंशिक रूपमा जंगलमा? यो कम रखरखाव हो वा मैदान मैनिचर गरिएको छ वा खाली गर्न आवश्यक छ? के त्यहाँ बारहमा बगैंचाहरु छन् कि ताजा फूलहरु प्रदान तपाइँको तालिका अनुग्रह गर्न को लागी? टेनिस कोर्टको लागि भूमि सपाट र उपयुक्त छ वा स्विमिंग पूल? के तपाईका छिमेकीहरू नजिकै हुनुहुन्छ र तपाईंले उनीहरूलाई याद गर्नुहुनेछ? के तपाईको समुदाय सक्रिय छ? के तपाईं आफ्नो छिमेकीहरू देख्न सक्नुहुन्छ वा पार्क जस्तै सेटिंग मा तपाईं राम्रो निजी हो?
निम्नलिखितaको एक उदाहरण हो घर वर्णन भावनात्मक शब्द प्रयोग गरेर। यो घर को भन्दा अधिक सेटिंग को एक मानसिक छवि पेंट गर्दछ। सम्पत्ती विवरण सब भन्दा महत्त्वपूर्ण छ किनकि यसले एक खरिदकर्तालाई ईतिहास र खेतको सम्पत्ती को प्रयोगको बारे जान्न दिन्छ। घर आफै बिक्री सुविधा छैन। तपाईको सम्पत्ती विवरणलाई सामान्य ग्राहकलाई सम्पत्ति वर्णन गर्नुको सट्टा सही क्रेतालाई निर्देशन दिन धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
आफ्नो घर वर्णन गर्दा विशेषणहरू प्रयोग गर्नुहोस् - भावनाहरू प्रयोग गर्नुहोस्
ग्रान्डमा एलिसनको स्थान - AC० ACRES
प्रत्येक आइतवार, पापीहरू, र सन्तहरू हजुरआमा एलिसनको घरमा देखा पर्दछन्। कुनै निमन्त्रणा आवश्यक छैन, खानाको अभाव छैन - फ्राइड कुखुरा, फुलिएको आलु, फ्राइड भिंडी, र अधिक। भान्साकोठा कोठा थियो र हामी सबै फिट छौं - तौल बाहिर तताएको बिस्कुट। प्रार्थना, त्यसपछि भाँडा पास - सबै गए।
बच्चाहरू जताततै, ढोका ढकढक्याउँदै, बेडरूममा माथि र तल लुकिरहेका छन्। ठूलो खलिहानमा, मानिसहरू पशुधनको बारेमा छलफल गर्छन्, र कहिले वा यदि काठ काट्ने। महिला wraparound पोर्च मा आराम। मिठाईका लागि केरा पुडिंग!
आफ्नो घर वर्णन गर्न विशेषणको साथ आउन समस्या भइरहेको छ?
होशियार रहनुहोस् उही शब्दहरूलाई अधिक प्रयोग नगर्नुहोस्! घर वा घर भन्ने शब्द प्रयोग गर्नु राम्रो हो? "घर" शब्द प्रयोग गर्नुको सट्टा तपाई आफ्नो वर्णनमा "घर" शब्द प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यसले तपाइँको सम्पत्तीलाई न्यानो र अनुभूति दिन्छ। घर शब्दले घरको चरित्र वर्णन गर्दछ। खरीददारहरूले तपाइँको वर्णनसँग सम्बन्धित छ र थाहा छ कि यदि तपाइँ तपाइँको सम्पत्ती खरीद गर्नुहुन्छ भने उनीहरू "घर" मा महसुस गर्दछन्।
घर वा सम्पत्तीको प्रकारमा निर्भर भई, तपाइँले ती शब्दहरू फार्म, वा कुटीज, गृहस्थल, मन्टर वा महलका साथ प्रतिस्थापन गर्न सक्नुहुनेछ - एक वर्णनात्मक नाम प्रयोग गर्नुहोस् जसले अर्थ बनाउँदछ र तपाइँले व्यक्त गर्न खोज्नु भएको कुराको वास्तविक छवि दिन्छ। म प्रयोग गर्छु Inspirassione.com विचारको साथ सहयोगको लागि विशेषणको साथ आउँदछ जब कुनै घर वर्णन गर्दछ। साइटले तपाईंलाई "सुरुचिपूर्ण शब्दहरू" छान्न मद्दत गर्दछ। तपाई बिज्ञापन, नाम, क्रियापदका लागि बिभिन्न बिभिन्न भाषाहरुमा पनि सल्लाह लिन सक्नुहुन्छ। थप, साइट प्रुफरीडिंग प्रदान गर्दछ तर म व्याकरणको नि: शुल्क संस्करण प्रयोग गर्दछु!
“घर भित्ताले बनेको हुन्छ। भित्ता चीजहरू "समावेश" गर्न डिजाइन गरिएको छ। हामी भित्ताहरू र पर्खालहरू खरीद गर्दछौं हाम्रो विचारहरू, हाम्रा भावनाहरू। हामी भित्ताहरूमा कोठाहरू सिर्जना गर्दछौं। हामी हाम्रो सपनाहरूले भित्ताहरूलाई रंग दिन्छौं। जब पर्खालहरु हाम्रो व्यक्तित्व - हाम्रो अनुभवहरु संग इम्बेड हुन्छ घर हाम्रो "घर" मा परिवर्तन हुन्छ।
जब हामी घर बेच्ने निर्णय गर्छौं, हामी अझै पनि यसलाई हाम्रो "घर" को रूपमा देख्छौं। यसको मूल्यको बारे हाम्रो धारणा हामीले हाम्रो लगानीहरूको कति रकम मात्र होईन तर हामी आफैले कति लगानी गरेका छौं। हामी बुझ्दैनौं कि एक खरीददारको आँखामा, हामी केवल "घर" बेच्दैछौं, जुन घर नयाँ मालिकले उसको व्यक्तित्वमा छाप्छ - र चक्र जारी रहन्छ! "
© ब्रेन्डा थॉम्पसन, २०१।
घर वर्णन गर्न भिडियो बनाउने विचार गर्नुहोस्। तपाईं सुविधाहरू एक रमाईलो तरिकामा औंल्याउन सक्नुहुनेछ “धेरै” सेल्चिन पनि!
माथिको भिडियोमा, मैले चित्रहरूको प्रयोग गरें घर वर्णन गर्नुहोस् बरु लामो र शब्दयुक्त वर्णन भन्दा हामीलाई विश्वास छ कि यस सम्पत्तीको खरीददारले यसलाई सम्भवतः छुट्टी घरको रूपमा प्रयोग गर्ने छ। हामीसँग पहिले नै सबै तथ्या .्क डाटासँग लेखिएका विज्ञापनहरू थिए तर सम्पत्तीको सम्भावित प्रयोगको लागि खरीददारको आँखा खोल्न चाहन्छौं। मैले एउटा सनकी र रमाईलो फन्ट र एक सानो हास्य प्रयोग गरे र यसले काम गर्यो! र, किनभने यो एक हल्का मनको दृष्टिकोण थियो, खरीददारहरू धक्का वा डर महसुस गर्दैनन् एजेन्टमा पुग्न सम्पत्ती हेर्नको लागि।
रमाईलो गर्नुहोस् तपाईले आफ्नो घरको घर जग्गाको विवरण लेख्दा! आफ्नो मनबाट बोल्न डराउनु हुँदैन। कथाहरू साझा गर्नुहोस् ताकि खरीदारहरू आफैं त्यहाँ बस्न र आफ्नै कथाहरू सिर्जना गरेको देख्न सक्दछन्। तपाईंको भावनाहरूलाई स्वतन्त्र बग्न दिनुहोस् र तपाईंको सम्पत्तीलाई शानदार सम्पत्ति वर्णनको साथ जीवन दिनुहोस्।
In असंगठित, हरित भवन
पोस्ट डिसेम्बर 28, 2018
तपाईंको घरमा बायोफिलिक डिजाइन कसरी समावेश गर्ने
तपाईंको घरको क्षेत्रहरूमा बायोफिलिक डिजाइन प्रयोग गरी मानव वातावरणको प्राकृतिक जैवथ्महरूसँग सिङ्क गर्ने बलियो वातावरण सिर्जना गर्ने एक आवश्यक भाग हो। तपाईंको घरमा समावेश गर्न यी बायोफिल्लिक डिजाइन सिद्धान्तहरूलाई विचार गर्नुहोस्। जीवनको सामान्य दायरामा प्रकृति फिर्ता ल्याउन ध्यान केन्द्रित छन्। तपाईं प्रकृति को क्षेत्रहरु लाई जोडने धेरै आर्किटेक्ट्स र इंटीरियर डिजाइनरहरु लाई मनुष्य को प्राकृतिक स्रोतहरु संग जोडने को लागि जीवित स्थानहरु मा फिर्ता मिल जाएंगे।
बायोफिलिक डिजाइन के हो?
बस राखे, बायोफिलिक डिजाइन मानिसहरूको घरको प्रकृतिमा मानिसहरूलाई जोड्ने प्रथा हो। यो केवल एक घर जग्गा जोड्न वा जीवित पर्खाल बनाउन नसक्ने तर एक प्राकृतिक डिजाइनमा प्राकृतिक रूपहरू, आकारहरू र प्रकृतिको रंगहरू प्रयोग गर्दछ जसले मानवताको स्वास्थ्यलाई समर्थन गर्दछ। बायोफिलिक डिजाइनले भौतिक वस्तुहरूको वेब समावेश गर्दछ जुन जटिल रूपमा एक ठाउँमा भित्र समग्र प्रकृतिको निर्माण गर्न एकसाथ काम गर्दछ।
प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष प्रकृति अनुभवहरू बुझ्नुहोस्
त्यहाँ दुवै छन् प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष अनुभवहरू कि तपाईं आफ्नो घर भित्र प्रकृति संग हुन सक्छ। सिधा अनुभवहरूमा लाइट, हावा, पानी, र बिरुवाहरूको साथसाथै जनावरहरू, मौसम, र प्राकृतिक परिदृश्यहरूको सामना गर्दछ। तस्विर विन्डो मार्फत लाइटको प्रयोग एक सीधा प्रकृति अनुभव हुनेछ र साथै जल फ्रान्ज सम्पत्तीमा स्थित एक घर हुनेछ।
प्रकृति को लागि केहि लंबी अनुभवहरु को प्राकृतिक चित्रहरु मा शामिल छ भूनिर्माण, जीवन, प्राकृतिक सामग्री, र रंगहरु, साथै प्राकृतिक ज्यामिति। एक बुलबुले ब्रोक रेकर्ड गरिएको ध्वनि मार्फत प्रकृति वा घर भित्र काठको टोन विशेषता गरी अप्रत्यक्ष प्राकृतिक अनुभव हुनेछ।
बायोफिलिक डिजाइन उदाहरणहरू
ताजा हवामा पहुँच
विन्डोज बायोफिलिक डिज़ाइन को एक आवश्यक भाग हो किनकी उनि प्रत्यक्ष प्रकृति अनुभव को एक विस्तृत श्रृंखला सम्म पहुँच को अनुमति दि्छ। सञ्झ्याल खुल्दा ताजा हावाले तपाईंको घरमा प्रवेश गर्न अनुमति दिन्छ जुन तपाईले प्रकृति संग साथै वर्तमान मौसमसँग जोड्नुहुनेछ। सूर्यलाइटले तपाईंको घरमा समेत फिल्टर गर्नेछ र पक्षीहरू चिन्तित, वर्षाको ढोकामा हिउँद, वा हावा उड्दै जस्तै प्रकृतिको आवाज हुनेछ। तपाईंको घरको सन्झ्याल सजिलै पहुँचयोग्य छन्, साथसाथै लगातार प्रयोगको लागि राम्रो मरम्मतमा, बायोफिलिक डिजाइनमा महत्त्वपूर्ण छ।
सीमा खाली गर्नुहोस्
धेरै जना बासिन्दाहरूले आफैलाई बढी समय बिताउन खोज्छन्। इच्छाले घरको जीवित ठाउँहरू पनि सानो घर वा गुणहरूमा पनि महत्त्वपूर्ण बनाउँछ। एक बाह्य स्पेस सिर्जना गर्न जुन सजिलै पहुँचयोग्य छ, प्रयोग गरी प्रायः प्रयोग गरिने छ र गाँउहरु लाई गहिराइमा प्रकृतिलाई जोड्न सकिन्छ। एक बाहिरी क्षेत्रमा लगानी गर्ने जुन घरभित्रको एकैछिनको रूपमा सजिलो हुन्छ, घरको इनडोर र बाहिरी स्थानहरू बीचको सीमालाई ध्वस्त पार्दछ।
घरको बाहिरी र इनडोर क्षेत्रहरू बीच सीमा धमिलो गर्न अर्को तरिकाले देशी बिरुवाहरू तपाईंको घरको क्षेत्रमा जोडेर गर्न सकिन्छ। देशी बिरुवाहरू घर भित्रै, जुन तपाईंको मौसममा पहिले देखि नै राम्रो हुन्छ, तपाईले केवल प्रकृतिको सराहना गर्न मद्दत गर्दछ तर प्रत्येक रोपणले अनूठा जीवनलाई पनि साक्षी दिन्छ। यी भित्री बिरुवाहरू पनि आफ्नो क्षेत्रमा देशी पौधों को जागरूकता सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ जुन तपाईलाई पहिचान गर्न र दैनिक आधार संग जोड्नु हुनेछ।
प्राकृतिक पहलहरू गम्भीर
घरमा बायोफिलिक डिजाइन समावेश गर्न को लागी सबै भन्दा राम्ररी तरिका मध्ये एक प्राकृतिक प्रकृति, रूपहरू र रंगहरु को प्रकृति को प्रशंसा गर्न को लागी जोडना छ। छोड्ने काठ ट्रिम वा तिनीहरूलाई चित्रण गर्नुको सट्टा एक प्राकृतिक रंग प्रस्तुत गर्न छनौट गर्नुहोस्। सीधा रेखाहरू नछोड्नुहोस् जुन जीवनमा नै छिटो हुन्छ तर असामान्य घुमाव र आकारको साथ प्रकृतिको रचनात्मकता गम्भीर हुन्छ। आफ्नो घर को काउंटर को आकार, दीवार को सजावट, या क्षेत्र को रगहरु को रूप मा संगठित घुमावदार रेखाहरु लाई जोडने को लागी सौंदर्य को धेरै रूपहरु लाई दोहोर्याउनुहोस् स्थानीय प्रकृति स्थलहरू। घरको धेरै क्षेत्रहरूमा लहरहरू, गोलाहरू, वा बिरुवाहरूको आकार नक्कल गरेर तपाईंको घरमा प्राकृतिक रूपहरू समावेश गर्नुहोस्।
अन्तरिक्ष भित्र एकता सिर्जना गर्नुहोस्
फेरि, बायोफिलिक डिजाइन केवल यी पहलुहरु मध्ये कुनै छनौट गर्न को लागी तपाईंको घर मा शामिल गर्न को लागी नहीं बल्कि यसको बजाय एकदम जटिल तरिका मा धेरै तत्वों को बुनाई। तपाईंको घरमा थप्न वस्तुहरू छनौट गर्नुहोस् जुन तपाईले न केवल तपाईंसँग तर सबैभन्दा बढी लाभ प्राप्त गर्न एक-अर्कालाई पनि बनाउँछ। तपाईंको परिवारको हरेक ठाउँ बनाउन प्रयास गर्नुहोस् बिओफिलिक डिजाइन डिजाईट तत्वहरू जुन सूक्ष्म तर घरमा इन्द्र र प्रकृति भित्रको सदन पाउन खोज्न मिल्छ।
त्यहाँ बायोफिलिक डिजाईनका थुप्रै पक्षहरू छन् जुन इन्टरनेट स्पेस भित्र प्रकृतिसँग जोड्न अद्भुत जटिल तरिका सिर्जना गर्दछ। आफ्नो घर मा बायोफिलिक डिजाइन को शामिल गर्न को लागि यिनी युक्तिहरु को ध्यान मा दैनिक आधार मा प्रकृति संग एकजुट गर्न को लागी।
Kena Morris एक अतिथि योगदानकर्ता, बागवानी र फूल विशेषज्ञ हो जुन प्रकृति को विकास मा साझा गर्न प्यार गर्दछ।
पोस्ट अक्टोबर 20, 2018
पश्चिमी उत्तरी क्यारोलिनाका पहाडहरू प्रमुख शहरहरू जस्तै अटलांटा, चार्लोट, रिलिङ्गबाट ​​एक सजिलो ड्राइव हो। थुप्रै निवासीहरू यहाँसँग छुट्टीमा वा सेवानिवृत्तिको घर छ। कूलर तापमानको हेडिंग र सप्ताहांतमा डामर जंगल बचाउन ठूलो शहर क्षेत्रका बासिन्दाहरूको लागि एक साधारण अभ्यास हो।
WNC पर्वतहरू लगभग हरेक प्रकारको जीवन शैली प्रदान गर्दछ जुन च्याम्पियनशिप गोल्फ कोर्सहरू, स्की र पोखरी रिसोर्ट्स, एशहेभेलमा बस्ने शहर, नजिकैका साना इजरायली समुदायहरूमा कल्पना गर्न सकिन्छ वा केवल 20 मिनेटमा देशमा पुग्न सकिन्छ। तपाईं Appalachian ट्रेल लाई बढ्न, कुनै पनि नदीहरु को संख्या मा पैदल गर्न, या ब्लू रिज पार्कवे ड्राइव गर्न सक्छन्, बस केहि आउटडोर गतिविधिहरु को नाम को लागि। यदि मान्छे-हेर्दै तपाईंको चीज हो भने, त्यहाँ एशहेलेभ शहर भन्दा राम्रो ठाउँ छैन! आवास विकल्पहरू मनपर्दो साना घरहरू, रिमोट लग क्याबिनहरू, जैविक खेतीहरू, महँगो लक्जरी सम्पत्तिहरूमा नदीपूर्त फिर्ता पुग्छन्। सबै मूल्य दायराहरू प्रतिनिधित्व हुन्छन्।
जब अनियमित पर्वत गुणहरू खरीद गर्दा विशेष गरी पहाड क्षेत्र धेरै ठूलो छ र विकल्पहरू धेरै छन्, क्षेत्र बाहिरका सम्भावित खरीददारहरू एकदम राम्रो सम्पत्तिको खोजीमा सुरु गर्नु अघि केही चीजहरू कम गर्न चाहन्छन्। दुईवटा महत्त्वपूर्ण विचारहरू बजेट हुन् र यस क्षेत्रको प्रकार जहाँ तपाईं बाँच्न चाहानुहुन्छ। उदाहरणको रूपमा, के तपाईं खरीदारी, रेष्टुरेन्ट र मेडिकल सेन्टिङ्हरू जस्ता सुविधाहरू नजिक हुनुहुन्छ भन्ने चाहानुहुन्छ वा तपाईंको जुनून मनोरञ्जन गतिविधिहरू जस्तै पैदल यात्रा, घोडामा चढाउने ट्रेल्स, उकालो वा स्कीइङ जस्ता निकटतामा रहनु हुन्छ? यी सधैँ अनौपचारिक अनन्य होइनन् किनकि हामीसँग धेरै समुदायहरू छन् जुन आधुनिक सुविधा र निकट नजिकैको नजिक मनोरञ्जन सुविधाहरू छन्। तपाईं पनि चाहानुहुने घरको आकारमा निर्णय गर्न चाहानुहुन्छ सहितको बेडरूम र बाथरूम चाहिन्छ।
जब अनियमित पहाड गुणहरू खरीद गर्दा, त्यहाँ एक विशिष्ट प्रकारको समुदाय हो जहाँ तपाईं बाँच्न चाहानुहुन्छ? पहाड क्षेत्रमा पहाड क्षेत्रमा एक विशाल विविधता छ जुन केही मनोरञ्जन गतिविधिहरूमा स्कीइंग, गोल्फ, गोठालो र माछा र डुङ्गा र पोखरीहरूमा उकालो जस्ता ध्यान केन्द्रित हुन्छ। त्यहाँ कला र आध्यात्मिक वा समग्र जीवन बिताउने समुदायहरू छन्। हामीसँग ऐतिहासिक जिल्लाहरू र गेट-लक्जरी समुदायहरू छन्। अर्को विचार भनेको तपाईंले चाहानु भएको जग्गाको रकम हो। विचार गर्नुहोस् कि तपाईं एक शहर वा शहरमा छिमेकीहरूको नजिकैको निकटता संग बाँच्न चाहानुहुन्छ, वा अधिक पृथक, ग्रामीण सेटिङमा।
यो केवल प्रारम्भिक बिन्दुहरूको केहि खरीददारहरू हो कि ग्राहक सम्पत्तिको खोजी सुरु गर्नु अघि विचार गर्न चाहानुहुन्छ। एकपटक तपाईंसँग के खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने राम्रो विचार हो, यो एजेन्सीलाई सम्पर्क गर्न वा अनलाइन खोज सुरु गर्ने समय हो। हाम्रो सबै विशेष "खोजहरू" सूचीहरू को अतिरिक्त, हामीले हाम्रो वेबसाइटमा, एक स्थानमा पहाड क्षेत्रमा सबै सूचीकृत अद्वितीय गुणहरूको एक सूची राख्नुभयो।
हामी पर्वतमा हरेक सम्पत्ती सूचीबद्ध समीक्षा गर्दछौं र पहिचान गर्दछौं जुन हामी अद्वितीय रूपमा वर्गीकृत गर्दछौं। हामी त्यसपछि उनीहरूलाई क्रम अनुसार क्रमबद्ध गर्दछौं र उनीहरूलाई विशेषFinds.com मा समीक्षा गर्नका लागि तिनीहरूलाई व्यवस्थित गर्दछ। यी गुणहरू निम्न कोटिहरूमा क्रमबद्ध गरिएका छन्: लग र रूस्टिक गुणहरू, ऐतिहासिक गुणहरू, जल फ्रिज वा जल दृश्यगुणहरू, घोडा गुणहरू र खेतहरू, आधुनिक हरियो एक्लेक्टिक हाउसहरू र लक्जरी घरहरू र अनुमानहरू।
SpecialFinds.com एकमात्र स्थान हो जुन अन्य अचल सम्पत्ति वेबसाइटहरु मा देखे जाने वाला सामान्य गुणहरु को अव्यवस्थित मार्फत खरीददारहरु पर्वत क्षेत्र मा लगभग हरेक सूचीबद्ध अद्वितीय सम्पत्ति खोज्न सक्छन्। हामी हाम्रो वेब ट्राफिकद्वारा बताउन सक्छौं कि किनेरहरूले साइटमा भ्रमण गर्नेछन्, प्राय: घण्टौंका लागि घिमिरे, विभिन्न अनियमित सम्पत्ति सूचीमार्फत खोज्दै।
हाम्रो असामान्य पहाड गुण खोज्नुहोस्
In असंगठित, एक अद्वितीय घर बेचन, मार्केट अनोखा गुणहरू
पोस्ट सेप्टेम्बर 1, 2018
बेच्ने अद्वितीय घरहरू प्राप्त विशेष "भेट्टाउन ..." को प्राथमिक मार्केटिंग फोकस हो।
हामी असुरक्षित गुणहरु को लागी एक अलग विचार पैटर्न को उपयोग गर्छन, हाम्रो अपवाद गुणहरु को लागि घर शिकारीहरु लाई संपर्क गर्न को लागी।
एक असामान्य सम्पत्ती बेच्दा, घर मालिकहरूले प्राय: पारंपरिक मार्केटिंग तरिकाहरू पत्ता लगाउँछन् जुन काम गर्दैन। विशेष "भेट्ट" एक अद्वितीय एजेन्सी हो कि एक अद्वितीय एजेन्सी को लागि एक विपणन एजेन्सी हो जो अद्वितीय घर बेचने को लागी एक रचनात्मक दृष्टिकोण लेता छ।
विशेष "फेला पर्यो ..." एक मार्केटिंग र विज्ञापन एजेन्सी हो जसले अनोखी घरहरूको मालिकहरूलाई मद्दत पुर्याउन माहिरको छ उनीहरूको गुणलाई ध्यान दिए र बेचेको छ। एजेन्सीले मासिक-मार्केट विज्ञापन अभियानहरूसँग व्यापक अभिनव प्रविधिहरू प्रयोग गर्दछ जुन व्यापक प्रदर्शन र सम्भावित घर-शिकारीहरूमा पुग्न सकिन्छ। तिनीहरू अनुकूलन अभिनव मार्केटिङ अभियानहरूको विकास गर्न एक-एक प्रकारको गुण प्राप्त गर्न।
विशेष "पत्ता लगाउने ..." मार्केटिङ दृष्टिकोणको पहिलो चरण हो "सम्पत्तिको भावनालाई समात्न।" एजेन्सीले घरको परिप्रेक्ष्यबाट लिखित लामो सम्पत्तिको कथालाई शिल्प दिन्छ। घर जीवनमा ल्याइन्छ र किन्नका रूपमा खरीद गर्न चाहनेहरू किनमेलबाट भावनात्मक रूपमा हस्तान्तरण गरिन्छ। खरिदहरू यो घर र मैदानमा बाँच्न मनपर्ने महसुस गर्न सक्छ।
अर्को, पूर्ण-पृष्ठ विज्ञापनहरू डिजिटल संस्करणहरूमा राखिएका छन् न्यूयोर्क टाइम्स, वाल स्ट्रीट जर्नल, Robb Report, हवेली ग्लोबल, duPont रेजिस्ट्री, र 120 अन्तर्राष्ट्रिय प्रकाशनहरू जुन 60 भन्दा बढी देशहरूमा प्रतिनिधित्व गर्दछ, एशिया, युरोप र मध्य पूर्वमा समावेश गर्दछ। एक HD भिडीयो टूर र Google धरती भिडियो फ्लाई-ओवर पनि सिर्जना गरीएको छ र सबै विज्ञापनहरूमा लिङ्क गरिएको इन्टरनेट, युट्युब, फेसबुक, र अन्य सोशल मिडियामा पनि प्रयोग गरिन्छ।
प्रत्येक घर विशेष "खोजहरू" वेबसाइटमा राखिएको छ, जुन अद्वितीय सम्पत्ति खरीददारहरूको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन छ। सबै पृष्ठहरू पाठकको भाषामा अनुवाद गरिएको छ। यो बेचेको अनन्य घरहरू प्राप्त गर्न आवश्यक रणनीति रणनीतिको एक महत्त्वपूर्ण भाग हो!
Brenda Thompson, विशेष "भेटिन्छ ..." संस्थापक, राष्ट्रपति, र सीईओ 1991 मा रियल एस्टेट उद्योगमा प्रवेश गर्नु अघि न्यूयर्क स्टक एक्सचेंजमा मार्केटिङ निदेशक थियो। उनले 1995 मा विशेष "भेटिन्छ ..." को स्थापना गरे र अनन्य रूप देखि अद्वितीय गुणहरु को विपणन मा र बेचे गए अनन्य घरों मा ध्यान केंद्रित गरेको छ। उनले फर्मको स्थापना गर्दा उनले लगातार रचनात्मक मार्केटिंग प्रयोग गरेका छन्।
थमसनले भने, "हरेक घर मैले स्वामित्व पाएको छु, अनौठो छ, न्यु योर्कको हडसन नदीमा एक ढुङ्गा गेटहाउसबाट उत्तर क्यारोलिनाका पर्खालहरूमा एम्बेडेड रंगीन बोतलों संग एक पोस्ट र बीम घरमा। जब म बेच्न तयार थिएँ, मेरो मात्र विकल्प पारंपरिक रियल स्टेट फर्महरूमा निर्भर थियो। मैले चाँडो मार्केटिंग कौशल को कमी को खोज गरे र कुकी-कटर घर को एक समुद्र मा एक अद्वितीय घर मा विपणन को विफलता को लागि एक निश्चित नुस्खा थियो। मैले त्यसपछि अचल सम्पत्ति उद्योगमा एक सुरक्षित बजारमा व्यावसायिक मार्केटिंगको आवश्यकता भर्ना गर्न "विशेष ... फेला पार्ने" स्थापना गरे। "
विशेष "खोजहरू ..." अद्वितीय गुणहरू बिक्रीका लागि एक व्यावसायिक मार्केटिंग र विज्ञापन एजेन्सी हो। उत्तर क्यारोलिनामा मुख्यालय, विशेष "भेटिन्छ ..." मार्फत संयुक्त राज्य र विश्वभरका अद्वितीय सम्पदाहरूको लागि मार्केटिंग र विज्ञापन अभियानहरू विकास र कार्यान्वयन गर्दछ। एजेन्सी उत्तरी नारोलिना र पेंसिल्वेनियामा लाइसेन्स अचल सम्पत्ति फर्म हो र ती स्टेटसहरूमा खरीद र विक्रेताहरू र उनीहरूको अनियमित सम्पत्ति लेनदेनको प्रतिनिधित्व गर्दछ।
बिक्रीको लागि हाम्रो अद्वितीय गुणहरू हेर्नुहोस्।
In एक अद्वितीय घर बेचन, मार्केट अनोखा गुणहरू
पोस्ट अगस्ट 13, 2018
एक पौंडी पोखरी लाइनर र Ch छनौट गर्दै
स्विमिंग पूल लाइनर रंगको लागि उत्तम छनौट के हो?
हालसालै, हाम्रो लक्जरी ऐतिहासिक घरहरूका मालिकहरूले पोखरी प्रयोग गर्न सकिने समय विस्तार गर्न उनीहरूको तातो भूमिगत स्विमिंग पूलको विनाइल लाइनर बदल्न अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरे। विक्रेताहरूले फरक लाइनर रंगहरू छान्नेसँग सम्बन्धित फाइदाहरूमा हेरे, खास गरी गाढा निलो बनाम हल्का निलो।
यो सम्पत्ती सिल्भाको आकर्षक कलेज शहरको पश्चिमी उत्तरी क्यारोलिनाको पहाडहरूमा छ। यो Asheville को पश्चिम भन्दा एक घण्टा भन्दा कम पश्चिम मा अवस्थित छ, र Asheville जस्तै, यस सम्पत्ति चार अलग asonsतुहरु को मजा छ - एक छोटो जाडो, लामो तातो वसन्त, छोटो तातो गर्मी, र लामो तातो गिरावट।
विक्रेताहरूसँग ठूलो परिवार छन्। बच्चाहरु र मातृभाषाहरु लगातार आगंतुक हुन्छन् र धेरै समय बिताउँछन् पूल। बिभिन्न पौंडी पोखरी लाइनरहरूको खोजीमा, उनीहरूले निम्न पेशेवर र विपक्षहरू पत्ता लगाए:
सफाई - एक लाइट स्विमिंग पूल लाइनरको रंग धेरै गहिराइ देखाउनेछ। एक्वा रंगीन लाइनर जुन तिनीहरू पहिले नै ग्याँस थियो, तर पूलमा कुनै पत्ति वा गड्ढोले गन्दा देखाएको कारणले गर्दा, विशेष गरी पानी तल मलबार बन्न पुग्यो।
तापमान - उनीहरूको नयाँ अँध्यारो स्विमिंग पूल लाइनर रंगमा उल्लेख गरिएको सबैभन्दा ठूलो फाइदा भनेको हो कि यसले सूर्यबाट तापलाई अवशोषित गर्दछ जुन उनीहरूको पूर्व लाइट रङ्ग पूल लाइनरको विरोध गर्दछ जुन सूर्यको प्रतिबिम्बित गर्दछ।
ऊर्जा बचत - यस पूल मा एक नयाँ ग्याँस हीटर छ, तर नयाँ अँध्यारो स्विमिंग पूल लाइनर को रंग को कारण, हीटर अक्सर को रूप मा प्रयोग गरेन र निश्चित रूप देखि ग्याँस उपयोग को कम गर्दछ!
तल रेखा, तिनीहरू नयाँ अँध्यारो स्विमिंग पूल लाइनर रङलाई माया गर्छन्। औपचारिक रूपमा, पूलले घरको बाहिरी संग सुन्दर रूपमा मिश्रण गर्दछ। पूल धेरै अधिक निमन्त्रणा छ र एक रमाइलो उपस्थिति छ!
यो घर र अचम्मको सम्पत्तिको बारेमा थप जान्नुहोस् जुन वर्तमान $ 865,000 को लागि बिक्रीको लागि हो:
पोस्ट जुलाई 22, 2018
अलौकिक घर बेचन | अद्वितीय घर बेचन
अलौकिक घर बेचन मा सुझाव
बिक्री भौतिकवाद घरहरू अनौठो चुनौतीहरू छन्। त्यहाँ एक विशेष कलिंग राख्ने यस पृथ्वीमा घरहरू छन्। प्राय स्थान जसको सम्पत्ती सम्पत्ति अवस्थित नयाँ मालिकमा पुग्छ। खरिदहरू सम्पत्तिको लागि एक विज्ञापनमा आकर्षित हुन सक्छ तर सेटिङमा कुनै जडान नभएको महसुस गर्न सक्दछ। जब दायाँ खरीदार सँगै आउँछ, तिनीहरूलाई आवश्यक भन्दा "जडान" गर्न वा प्रस्तावको लागि धक्का गर्न आवश्यक छ।
यस्तो स्थिति हो हाम्रो एक विशेष "भेटिन्छ ..." सूचीमा 1192 खरगोश छाला रोड वेन्सविले. यो घरको 'यसको अर्को मालिक फेला पार्न' को इतिहास छ। वर्षहरूमा यस सम्पत्तिले धेरै विश्वव्यापी ध्यान प्राप्त गरेको छ। यसको प्रारम्भिक वर्षहरूमा, यो मानसिक, लेखक र ब्रह्मांडिक सञ्चालक ग्रित्रा वुड्रूको घर थियो। स्पेस टेक्नोलोजी र रिसर्च फाउण्डेसन (स्टार) को संस्थापकहरूको लागि कर्पोरेट रिट्रिटको रूपमा अभिनयले यो संसारभरका धेरै प्रसिद्ध दर्शकहरूलाई मेजबानी गर्यो। हाल, यो निजी, पारिवारिक निवासको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यी स्वामीहरूले एउटा सपनामा सम्पत्ती देखेका थिए र यस्तो बलियो बोलाएको महसुस गरे कि उनी फ्लोरिडाबाट निस्किए - कुनै प्रश्नहरू सोधेनन्! तिनीहरू पछि पत्ता लगाए कि 23 एकडमा जीवन उपचार क्रिस्टल र एक भव्य थियो कि तिनीहरूले पुन: खोल्न सक्षम थिए।
इफेफिकिकल घर बिक्री गर्दा, यो महत्त्वपूर्ण छ कि सबै कुरा ऊर्जाबाट उत्पन्न हुन्छ र "भावना" भन्ने कुरामा ध्यान दिँदै, तपाईले घरलाई अर्को मालिकलाई आकर्षित गर्न अनुमति दिन सक्नुहुनेछ।
यदि तपाईंले स्वामित्व लिनुभएको एक विशेष स्वामित्व छ भने तपाइँलाई विशेष बुलेट छ भने, यदि तपाईं वा साथीहरू निको हुन्छन् वा तपाईंको सम्पत्तिमा गएर स्वस्थ बन्न सक्नुहुनेछ, तपाईले एक मेटाफेसिकल हाउसको मालिक हुन सक्नुहुन्छ!
अर्को खरीदार फेला पार्न उच्च बलमा कल गर्न मद्दत गर्न सक्छ। मैदानमा हिंड्नुहोस्, शान्त रहनुहोस्, मनन गर्नुहोस् र कुनै विशेष संवेदनालाई ध्यान दिनुहोस्। तपाईंको सम्पत्तिमा एक प्राण छ जुन तपाईंको सामु अस्तित्वमा हुन सक्छ। सुन्न र महसुस गरेर यसलाई ट्याप गर्नुहोस्।
मेटाफेसिकल गृहहरू बेच्न सक्छ समय चाहिन्छ र धैर्यता चाहिन्छ। नयाँ स्वामी देखा पर्दा समान अवसरहरू चिन्ह लगाउन खुला हुनुहोस्!
In एक अद्वितीय घर बेचन
पोस्ट अप्रिल 14, 2018
अपील रोक्न - बेच्न एक घर तयार गर्न
पहिले र पछि - बेचन गर्न घर तयार गर्न
तपाईंको घर बेच्न तयार पार्न अपील रोक्न अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईंको सम्पत्ति अधिक चाँडै बेच्ने मौकाको लागि सुधार गर्न र तपाईंको घरलाई भीडबाट खडा गर्न, यो आवश्यक छ कि तपाईले रियलरलाई फोन गर्नुभन्दा पहिले, केहि समय बित्नुहुन्छ तपाईंको सम्पत्तिको दुरुपयोग अपील मा ध्यान केन्द्रित गर्न र तपाईंको घर बेच्न तयार हुन। क्रेताको "खरिद निर्णय" को एक ठूलो भाग तपाईंको सम्पत्तिमा पहिलो केहि सेकेन्डको समयमा हुन्छ। क्रेताले तपाईंको क्यान्सर अपील तुरुन्तै सूचना गर्नेछ। निश्चित गर्नुहोस् कि तिनीहरूले प्रारम्भबाट उत्कृष्ट महसुस गर्छन्। तपाईंको घर र सम्पत्तीलाई खरिद गर्ने यो तरिका हेर्नुहोस्।
चरण 1: अपील रोक्नुहोस् - तपाईंको सम्पत्तिमा ड्राइभ गर्नुहोस्
तपाईंको सम्पत्ति कसरी रोक्न देखा पर्दछ भनेर नोट गर्नुहोस् - "अपील रोक्नुहोस्" वा वा, यदि खरिदलाई खुट्टामा पुर्याउनेछ, त्यस वानिकी बिन्दुमा हेर्नुहोस्। - के ड्राइभ को मरम्मत को आवश्यकता छ? - के योर्ड माईन छ? - त्यहाँ त्यहाँ झाडी वा मृत पेडको खाँचो छ? - के तपाईंसँग बाड़ छ कि बिच्छेद भएको छ, वा टिल्टिंग वा क्षतिग्रस्त मेलबक्स?
चरण 2: घर माथि हिँड्नुहोस्, र तपाईंको मुख्य प्रविष्टिमा।
- के तपाईंको हिड राम्रो मरम्मतमा छ? - के त्यहाँ रद्दी टोकरी देख्न सकिन्छ? - के ढोका चित्रण वा मरम्मत आवश्यक छ? - गटटरहरू ओभर र डाउनस्पट चलिरहेको छ। Potted plants वा ताजा फूलहरू तपाईंको प्रवेश मार्ग वा सिराएर थप्न मद्दत गर्दछ!
चरण 3: ढोका खोल्नुहोस् र भित्र हेर्नुहोस्।
- के ढोका काम गर्दछ? - के ढोका बन्द र सजिलै अनलक गर्नुहुन्छ? - के ढोका चक्कु छ? - ढोकामा विन्डोहरू छन् वा ढोकाको वरिपरी सफा गर्छन्? - Entway floor, floor matte or rug clean? - हेर्नु - त्यहाँ कोबवेबहरू छन्?
चरण 4: तपाईंको घरमा हिँड्नुहोस्
- के सञ्झ्याल र फर्श सफा छ? - तकियाहरू पक्कै हुँदैन, लुगा लगाउनु पर्छ। कोठाहरू ताजा सुत्नुपर्छ - कुनै पाल्तु छैन वा धुम्रपानका बगैंचाहरू! आवश्यक छ भने, कोठा ionizer मा odors को समाप्त गर्न लगानी।
चरण 5: मेरो निःशुल्क जाँच सूची प्रयोग गर्नुहोस्
बाहिरको सुरू गर्न र भित्र काम गर्ने निम्नसँग समान सूची प्रयोग गर्नुहोस्। ब्रेकडाउन चीजहरू जुन तपाईले परिरक्षणमा ध्यान दिनुहुन्छ, र उपलब्ध भएमा कसैले कसैलाई पूरा गर्न असाइन गर्दछ। एकपटक तपाईंले सबै चीज समाप्त गर्नुभएपछि - तपाईंको दुर्व्यवहार अपील संग ताजा भयो र तपाईले आफ्नो घर बेच्न तयार गर्न को लागी सबै अन्य उपाय लिनु भयो भने, तपाईंको सम्पत्तिले राम्रो बिक्री गर्न सक्दछ कि तपाई बिक्रिको बारेमा दोस्रो विचार हुन सक्दछ। यदि यो मामला हो भने, तपाईंको रियलरलाई कल गर्ने समय हो! डाउनलोड विशेष खोज हाउस बिक्री गर्न PDF को रूपमा सूची गर्नुहोस्
In Asheville एनसी रियल एस्टेट
पोस्ट मार्च 13, 2018
असामान्य घरहरु Asheville एनसी
एशहेविल नेकपामा एकदम असामान्य घरहरू छन्। सबै भन्दा असामान्य, निस्सन्देह, प्रसिद्ध छ Biltmore एस्टेट, आठौं स्थानमा अमेरिकाको मनपर्ने वास्तुकला द्वारा अमेरिकी आर्किटेक्ट्स संस्थान, र केहि 8000 एकडमा बस्छ।
एसिहेविले र हेनसनसनभिले नेकपा-माओवादीले 1995 मा असामान्य घरहरू मार्केटिङ गरेमा, म क्षेत्रमा अनौठा, अजीब, अजीब र अद्भुत गुणहरूको व्यापक दायरासँग धेरै परिचित छु।
वरपरको काउन्टीहरू हेर्नको लागी यो नक्शामा एक नज़र लिनुहोस्।
Buncombe काउंटी - जहां एशेलो स्थित छ;
हेन्डसन काउन्टी - शान्त शहर संग दक्षिण र पूर्व सम्म हेन्डरसनभिले;
Haywood काउंटी - पश्चिममा, अद्भुत साथ वेनेविले, बस Asheville देखि 20 मिनेट;
म्याडिसन काउन्टी - कलात्मक र खेती समुदायका साथ मार्शल र मार्स हिल;
पोल्क काउन्टी - घोडा देशको साथ प्रयास गर्नुस;
ट्रांसिल्वेनिया काउन्टी - सुन्दर सुन्दर शहरको साथ Brevard, र 250 झरना माथि!
Yancey काउन्टी - उत्तर र पूर्वतिर Burnsville;
तपाईंलाई अनइचेन्ट गुणहरू फेला पार्न Asheville बाट टाढा टाढा छैन। एउटा यस्तो सम्पत्ति वेन्सविलेमा स्थित छ। मालिक द्वारा नामित "गूंज", यो सम्पत्ति मा 326 ह्वाइंग ट्रेल हिलिंग (जीपीएस होइन!) त्यो नाम दिइएको थियो किनकी उनले विश्वास गरे कि "तपाईंले केहि कुरामा के राख्नुभएको छ"।
माथि 5800 वर्ग फुटको साथ, पेशेवर शेफको भान्साको साथ यो घरमा प्रत्येक सुविधा हो जुन तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुनेछ लगभग $ 300,000 मूल्याङ्कन मूल्यको अधीन छ!
बिक्रीको लागि आधुनिक घर, लग क्याबिन र रूस्टिक होमहरू, बिक्रीका लागि ऐतिहासिक घरहरू, घोडा गुण र खेतहरू, देश फार्महाउस, बिक्रीको लागि वाटरफ्रेन्ट वा पानी दृश्य घरहरू
पोस्ट फेब्रुअरी 13, 2018
कसरी अद्वितीय घर बेच्न
यदि तपाईले कहिल्यै अनैतिक सम्पत्ति स्वामित्व पाउनुभयो वा असामान्य गृह, तपाइँ बिक्रीको चिन्ता बुझ्नुहुन्छ। तपाईं जान्नुहुन्छ कि, जो कोहीले तपाइँको ठाउँ भ्रमण गरेको भए तापनि त्यसलाई मनपर्छ, उनीहरूको खरीद गर्न साहस नहुन सक्छ। त्यसोभए तपाई कसरी एक अद्वितीय सम्पत्ति बेच्नुहुन्छ? तपाईं एक अद्वितीय घरको लागि एक अनूठा खरीदार कसरी आकर्षित गर्नुहुन्छ?
यो तपाईंले विज्ञापन गर्ने तरिकामा तल आउनुभयो!
असामान्य घरहरू खरिदका फरक दर्शकहरू अपील गर्छन्। त्यहाँ त्यहाँका ग्राहकहरू छन्, विशेष गरी केही फरक खोज्ने, असामान्य केहि - एक अद्वितीय सम्पत्ति।
म, आफैँ, त्यो कोटीमा गिर्यो। मैले खोजिरहेको सम्पत्तिको वर्णन गर्न सकेन, किनभने मैले यो देखेको छैन। मलाई थाहा थियो कि म कुकी कटर घर चाहँदैन।
मेरो पहिलो घर खरिद गरे पछि, NY मा हडसन नदी को नजरअंदाज गरेर एक पत्थर गेटहाउस, मलाई एहसास भयो कि त्यहाँ मेरो जस्तै अन्य खरीदार हुनु पर्छ। यसैले मैले विशेष "खोज्छ ..." शुरू गर्यो, जहाँ हामी केवल असामान्य गुण बेचन गर्छौं।
अद्वितीय सम्पत्ती खरिदहरू अन्य खरीददारहरू भन्दा फरक छन्, किनकि उनीहरूले भावनाहरूमा शुद्ध रूपमा खरीद गर्छन्, उनीहरू पछि "तथ्याङ्क" मा ध्यान केन्द्रित हुन्छन् - तिनीहरूसँग भावनात्मक रूपमा जडान भएका छन्। त्यसैले तपाईंको एजेन्टले चीजहरूको बारेमा विज्ञापित गर्न आवश्यक छ जुन एक अद्वितीय सम्पत्ति खरीदकर्तासँग सम्बन्धित हुनेछ।
यहाँ एउटा विज्ञापन को एक उदाहरण हो जुन मैले मेरो अघिल्लो लिस्टिङ मध्ये एक लेखे:
विज्ञापनले यस पटकको इतिहासलाई एक पटक बिर्सिएको विशेष वर्णन गर्दछ "फेला पार्नुहोस् ..."। यो अनन्य सम्पत्ति धेरै प्रस्तावहरू र3दिन भित्र बेचेको थियो।
पर्दाको ढोका एक ढोकामा बच्चा ड्यासको रूपमा स्लैमले अर्को अर्को। छोराछोरीले लुगा लगाउँछन् किनकि छोराछोरीले लुकाउन खोज्छन् - 'लान्डमा खोज्नु हुँदैन'। ग्रोड अप अप एसप आइपुग्दा चिया चट्टानहरूमा चाउरापाउन्ड पोर्चमा आइपुग्यो। एउटा गिंगम कपडा पिकनिक टेबलहरू लुकाउँछिन् जहाँ लिम्बूड र केकहरू पासर्सबीबाट निब्बलिन्छन्। नोस्टेलगिया कॉटेजले एक धनी सामाजिक इतिहास रहेको छ जहाँ साथी र समुदायले विभिन्न अवसरको लागि वार्षिक रूपमा इकट्ठा गर्दछ। राम्रो तरिकाले ज्ञात ट्यानर परिवार द्वारा 1908 मा बनाइएको, त्यो लगभग3एकडमा सडकबाट फर्केर बस्छ। ताजा छत र ताजा अवसंरचनात्मक अद्यावधिकका साथ ताजा तातो उज्ज्वल प्वाइन्ट, त्यो नविकरणको लागि राम्रो तरिकाले छ। तिनका बलियो पर्खालहरूले गर्मी, प्रेम र गर्वको इतिहास राख्दछन्, केहि मूल विशेषताहरु को विस्तार मा स्पष्ट रहेको छ - अझै टाँस्ने खेत मा पेड देखि ओक फर्शिंग कट, मूल ट्रिम र फ्रेम को काम, फ्लायर मा प्लास्टर को पर्खालहरु, सोही 11 पैदल छत,4ताजे पेंट बेडरूम र2बाथरूम। भान्सा सबै मूल हो र कस्मेटिक नवीकरण को आवश्यकता छ, अझै सम्म ठाउँ अलग नाश्ता कोठा संग ठूलो छ। यो सम्पत्ति तयार छ र किनमेल, डाइनिंग र मेडिकल सुबिधाहरूको हिँड्ने दूरी भित्र क्यान्सर पर्खिरहेका छन्। केहि 2800 वर्ग फुट संग, उनले एक अद्भुत B & B बनाते थिए।
आफ्नो एजेन्टरलाई सोध्नुहोस् "भावनात्मक रूपमा" आफ्नो गुण वर्णन गर्नुहोस्, ताकि एक खरीदारले सम्पत्तिको "इतिहास" महसुस गर्न सक्छ वा तपाईंको सम्पत्तिमा कसरी रहन सक्छ, र तपाईंको घरमा, जहाँ जहाँ तिनीहरू हो, जहाँ उनी पढिरहेका छन् तपाईंको सम्पत्ति विज्ञापन।
हामी जुन गर्छौं, विशेष "फेला पार्छ ..." मा। र यो काम गर्दछ!
अन्य विचारहरूका लागि तपाइँले तपाइँको अनोखी सम्पत्ती बेच्न मद्दत गर्न, मेरो पोष्ट पढ्नुहोस्: एक घर कसरी मूल्य निर्धारण गर्नुहुन्छ
एक अद्वितीय घर बेचन
Asheville एनसी रियल एस्टेट
एक अद्वितीय गृह किन्न
मार्केट अनोखा गुणहरू
एक घर जग्गा विज्ञापन लेखन